Weerarada Daacish ay ka gaystaan Somaliya oo kordhay – XAMAR POST
Weerarada Daacish ay ka gaystaan Somaliya oo kordhay
Kooxda Daacish ayaa lagu soo waramayaa inay kordheen weerarada ay ka fuliyaan gudaha Somaliya, marka loo eego sida muddooyinkaan dambe sare ay ugu qaadeen.
Wargeyska Long War Journal, ayaa qoray Warbixin dheer oo uu kaga hadlaayo dilalka qorsheysan ee Daacish ay ka gaystaan Magaalada Muqdisho gudaheeda iyo deegaanada ku dhaw.
15kii April,Warbaahinta Daacish ee Acmaaq ayaa sheegtay in ciidan u daacad ah Daacish ay Degmada Afgooye ku dileen sarkaal ka tirsan Milatariga Soomaaliya, todobaad kaddib waxaa ay baahisay dilka sarkaal ka tirsan Nabad Sugidda Soomaaliya oo lagu dilay Muqdisho, afar maalmood kaddib haddana waxa ay baahisay dilka sarkaal kale oo ka tirsan Nabad Sugidda Soomaaliya.
Isbuucii aynu soo dhaafnay Daacish waxa ay sheegteen inay Muqdisho ku dileen Sarkaal ka tirsan ciidamada Booliska, halka Doraad ay shaaciyeen inay dileen askari ka tirsanaa ciidamada Nabad Suggida oo Muqdisho ay ku dileen.
Sanadkaan 2018 Daacish ayaa Muqdisho waxa ay ka fulisay 13 weerar oo lagu beegsaday askar Boolis ah iyo kuwa Nabad Suggid ah oo dilal kala duwan ay ku fuliyeen Kooxda.
Daacish ayaa juhdi badan waxa ay ku bixiyaan suurtagalnimada muuqaal Video ah inay ka duubaan kadibna ay ku baahiyaan Baraha Bulshada si dadka ay u dareemaan nooca dilalka Daacish inay yihiin kuwa argagax leh.
Daacish waxa kale oo ay weeraro ka fuliyaan deeganada Maamulka Puntland oo ay ku beegsadaan askarta iyo Saraakiisha ciidamada Puntland, halkaasi oo ay ku dilaan.
Acmaaq oo ah Warbaahinta Daacish waxa ay baahisay 45 weerar oo ay ka geysatay Soomaaliya,14 ka mid ah waxaa ay ka dhaceen caasimadda Muqdisho,12 waxa ay ka dhaceen Shabeellaha hoose gaar ahaan Afgooye iyo agagaarkeeda halka kuwa kale ay ka dhaceen Boosaaso iyo Qandala,kuwo kale ayey sheegteen in ay ka geysteen Magaalada Baydhaba ee xarunta Gobolka Baay.